Ihlobo Elipholileyo kunye Nesitudiyo Eshushu Sasebusika! - I-Airbnb
Ihlobo Elipholileyo kunye Nesitudiyo Eshushu Sasebusika!
Porossan, Valle d'Aosta, Italy
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMatteo
Ingaphakathi elityheli! ngeevaults ezineembambo.
Isitudiyo esincinci esisetyenziswa njengendawo epholileyo nezimeleyo yesitudiyo. Ukuphosa ilitye ukusuka e-Aosta, kwimizuzu engama-30 ngeenyawo okanye imizuzu emi-5 ngemoto unokufikelela kumbindi wedolophu.
Iilwimi ezithethwayo: isiFrentshi, isiTaliyane
Kupholile ehlotyeni kwaye kushushu ebusika, ngaphakathi uya kufumana ikhitshi enayo yonke into oyifunayo ukupheka, ibhedi yesofa yobukhulu bokumkanikazi kunye nebhedi eyongezelelweyo yesofa, igumbi lokuhlambela elizimeleyo elineshawa, iTV kunye neWifi.
Nangona iphantsi, igumbi likhanya kakhulu kwaye lijonge iintaba zePila !!
4.81 · Izimvo eziyi-165
IPorossan yindlu encinci yaseAosta ngaphandle nje kombindi wesixeko, ilula kakhulu kwaye ilungele abo bafuna ukuphumla kwindawo ezolileyo emaphandleni kodwa ikufutshane kakhulu esixekweni.
Suono e insegno, condividendo le emozioni che la musica mi trasmette durante la professione ... con dedizione e passione ... sperando di seminare dei piccoli semi che potranno esse…
Kuwo nawuphi na umbuzo, ingxaki kunye / okanye imfuno, ungaqhagamshelana nam ngefowuni okanye ngomyalezo.
Inombolo yomthetho: AO002563
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porossan